(Dhagayso) ?Aduunka intaan joogay waxaa iigula yaab-badnayd in gobolka Sanaag loosoo magacaabo dadkii duminta waday? Dabayl. – Radio Daljir
Oktoobar 9, 2012 9:00 b 0
Baran, Oct, 09 -? Guddoomiyaha gobolka Sanaag Maxamuud Siciid Nuur Dabayl oo waraysi gaar ah siiyay Radio Daljir ayaa wax lala-yaabo ku tilmaamay in gobolka Sanaag guddoomiye loogu magacaabo xubin ka mid ah dadkii ay nabad-galyada dhibta ku hayay. Sida uu hadalka u dhigay.
Md Dabayl, ?waxaa uu sheegay inuu la shaqaynayo cid-kasta oo dawladda Puntland ay usoo magacawdo gobolka, ayna ka go’antahay inuu kasii shaqeeyo jiritaanka dawladda Puntland, iyo sidii uu samaha ugu hoggaamin-lahaa shacab-waynaha gobolka Sanaag.
?Aduunka intaan joogay axaa iigula yaab-badnayd in gobolka Sanaag loosoo magacaabo dadkii duminta ku waday gobolka, mala dawladdu way ka baqday? sidaasina waxaa yiri Dabay.
Hadalkaan kasoo yeeray guddoomiyaha gobolka Sanaag Maxamuud Siciid Nuur ?Dabayl? ayaa kusoo beegmaya xilli ay jirta hadal-hayn ku saabsan in laga qaaday xilkii guddoomiyaha gobolka Sanaag.
Waraysi arrimahaasi oo dhan koobaya waxaa guddoomiyaha la yeeshay wariyaheena Maxamed C/llaahi Cali Kooshin oo kula xiriiray khadka taleefanka ee Baran.